Muqdisho Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Muqdisho'
Dab Xoogan oo Maanta ka Kacay Kaalinta Shidaalka Isgoyska Banaadir (SAWIRRO)
Dab xoogan ayaa maanta ka kacay Xarun Kaalin Shidaal oo ku taalla meel ku dhaw Isgoyska Banaadir ee Magaalada Muqdisho,dabkan ayaa ahaa mid qasaare xoogan geytay. Muuqaalka Dabka qabsaday kaalinta ayaa ahaa mid si dhaqsiyo ah cirka isu shareeray, iyadoo goobtaasi laga kala cararray, waxaana dadweyne isugu soo baxay goobta ay dadaal u galeen sidii …
DAAWO Saameynta uu Reebay Qaraxii Xalay Maqribkii ka Dhacay Muqdisho (SAWIRRO)
Saameynta uu Reebay Qaraxii Xalay Maqribkii ka Dhacay Muqdisho ayaa waxaa weli bur bur aad u xooganu uu ka muuqdaa goobtii uu qaraxa ka dhacay ee Isgoyska Jubba, kaasi oo ah meel ku dhaw Hotelka Dorpin ee Magaalada Muqdisho. Dad badan oo shacab ah ayaa xalay ku geeriyooday qaraxaasi, waana meesha dowladda ay sheegtay khasaaraha …
Ciidamada Booliska oo Xalay Hawlgalo Gaar ah ka Fuliyay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
Ciidamada katirsan Booliska Soomaaliya ayaa xalay waxa ay sameeyeen hawlgal ammaanka lagu sugayay, sidoo kalena lagu bartilmaameedsanayay xaafado lagu tuhunsanyahay inay ku dhuumaalaysanayaan rag ka tirsan ururka Al shabaab. Hawlgalka ayaa wuxuu ka dhacay Degmada Kaaraan, gaar ahaan xaafado ciidamada ay ka hayeen macluumaad, waxayna ciidanka galeen guryo bartilmaameed u ahaa. Ciidamada ayaa intii uu …
Ciidamada dowladda ayaa la galiyay feejignaan horleh oo dhanka ammaanka ah, iyadoo maalmihii la soo dhaafay aad u kordhiyay baarista gaadiidka mara wadooyinka muhiimka ah ee Magaalada Muqdisho. Xaalad fooljignaan ah ayaa maanta ka jirta Magaalada gudaheeda, waxaana laga cabsi qabaa in weeraro ay fuliyaan Xoogaga dowladda ka soo horjeeda, maadaama Bisha Soon ay tahay …
Diyaarad Lugaha u Bixiwaayeen oo Maanta ka soo Degtay Garoonka Aadan Cadde (SAWIRRO)
Dowladda Federalka ee Soomaaliya ayaa galabta ka hadashay diyaarad lugaha u bixiwaayeen ee ku soo degtay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, taasi oo ay la socdeen dad ajaanib ah. Agaasimaha Hay’adda Duulista Iyo Saadaasha Hawada Cali Axmed Macalin oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in diyaaraddani laga lahaa dalka Mareykanka, waxaana wararka ay sheegayaan inay …
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Ubax Dhigay Taalada SYL ee Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
Madaxweynaha jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta ubax xusuus ah dhigay taallada SYL ee magaalada Muqdisho. Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa Dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ee ay joogaan u diray hambalyo ku aaddan munaasabadda 15-ka May oo ah maalinta dhalinyarada, Islamarkaana ku beegan sannadguuradii 74-aad ee ka soo wareegatay aasaaskii Ururkii …
Qaban Qaabada 15-May Maalinta SYL oo si Xawli ah uga Socota Magaalada Muqdisho (VIDEO)
Waxaa magaalada Muqdisho ka socda qaban qaabada Xuska Munaasabadda 74-aad ee aasaaskii xisbiga dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL, kaas oo maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo magaalooyinka Soomasliya. Ururrada Dhalinyarada, Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga iyo bulshada rayidka ah ayaa lagu wadaa in si isku mid ah ugu dabaal-dagaan xuska maalintaasi astaanta u ah …